थाहा पाइराख्नुस आज शुक्रबारको राशिफलमा तपाईको भाग्य कस्तो छ ? - Rajmarga
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) समाजमा बोलिको प्रभाव बढ्ने हुनाले बोलेरै थेरै कामहरु गर्न सकिनेछ । व्यापारमा वढोत्तरिको योग रहेकोछ भने नयाँ व्यावसाय सुरु गर्न सकिनेछ । कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सुधार हुनेछ भने आफन्तको सहयोगले कामहरु समयमा नै सकाउन सकिनेछ । पारिवारिक जमघटमा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । माया प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुलाई समयले साथ दिनेछ भने जीवन साथीसँग थप आत्मियता बढ्नेछ ।
Previous post:दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से
Next post:आइपीएलमा सनराइजर्स हैदराबादसँग किङ्स इलाभेन पन्जाब ६९ रनले पराजित
आज सोमबार, कस्तो छ तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल
विहान उठ्नै वित्तिकै गर्नुहोस् यी काम, पैसाको कमी हुँदैन् : शास्त्र
आज बुधबार, शुभ-अशुभ कस्तो छ तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् राशिफल